အဓိကအစီအစဉ်အစီအစဉ် 2020 HPA Tech Retreat ကိုကြေငြာခဲ့သည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူ
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Main Program Lineup ကို ၂၀၂၀ HPA Tech Retreat အတွက်ကြေငြာခဲ့သည်
Main Program Lineup ကို ၂၀၂၀ HPA Tech Retreat အတွက်ကြေငြာခဲ့သည်
အဆိုပါ ဟောလိဝုဒ် Professional ကအစည်းအရုံး (HPA) သည်၎င်း၏ ၂၀၂၀ HPA Tech Retreat အတွက်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုကြေငြာခဲ့သည်®ဖေဖော်ဝါရီ ၁၇ ရက်၊ တနင်္လာနေ့မှဖေဖော်ဝါရီ ၂၀ ရက်တနင်္လာနေ့တွင်ကျင်းပမည်ဖြစ်သည်။ HPA Tech Retreat သည်အဓိကကွန်ဖရင့်အစီအစဉ်၊ Supersession, TR-X နှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုဇုန်များအပြင်လေးခုလုံးတွင်ပေါင်းစည်းထားသောကျယ်ပြန့်သောကွန်ယက်များနှင့်အစည်းအဝေးအခွင့်အလမ်းများပါဝင်သည်။ နေ့အဖြစ်အပျက်။ ၂၀၂၀ HPA Tech Retreat သည်စီနို၊ Rancho Mirage ရှိ Westin Mission Hills Golf Resort & Spa တွင်ပြုလုပ်လိမ့်မည်။
2020 အဆိုပါ 25 ခြေတစ်လှမ်းth ထင်မြင်ချက်ခေါင်းဆောင်မှု၊ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနှင့်ဆက်နွှယ်မှုများကိုအခြေခံသောဖိုရမ်အဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့သောနှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေး၏နှစ်ဖြစ်သည်။ ခန့်မှန်းပေမယ့်ကြိုတင်ခန့်မှန်းမဟုတ်ပါဘူး; အနှောင့်အယှက်ပေးမှု၊ သတင်းအချက်အလက်နှင့်စျေးကွက်အခြေပြုတင်ပြချက်များကိုကျော်လွှားသည့်စီးပွားရေးနှင့်မသက်ဆိုင်သောအာရုံစိုက်မှုဖြင့် HPA Tech Retreat သည်ရိုးသား။ စိန်ခေါ်မှုရှိသောဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်သောနေရာဖြစ်သည်။ နည်းပညာများကိုဤဖိုရမ်တွင်ဤ ၂၅ နှစ်တာကာလအတွင်းပြသခြင်း၊ ဖျက်သိမ်းခြင်းနှင့်ဆွေးနွေးခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနက်ရှိုင်းသောခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုသည်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အခြေခံကျသောပြောင်းလဲမှုများနှင့်တိုးတက်မှုများစွာဆီသို့ ဦး တည်ခဲ့သည်။
အဖွဲ့အစည်းသည် HPA Tech Retreat ၏နောက်အဆင့်သို့ပြောင်းလဲသွားသည်နှင့်အမျှအဖြစ်အပျက်သည်ဆက်သွယ်မှုလွယ်ကူချောမွေ့စေရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောပတ်ဝန်းကျင်တွင်လူသိများပြီးပေါ်ထွက်လာသောအင်ဂျင်နီယာ၊ နည်းပညာ၊ တီထွင်ဖန်တီးမှုနှင့်စီးပွားရေးတို့တွင်ဆက်သွယ်မှုနှင့်အတူ ပူးပေါင်း၍ ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည့်အခွင့်အလမ်းတစ်ခုဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ၎င်း၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ဆိုင်ရာချဉ်းကပ်မှုနှင့်အညီ ၂၀၂၀ HPA Tech Retreat သည် HPA Tech Retreat Maestro, Mark Schubin မှကြီးကြပ်ထားသောပြိုင်ဘက်ကင်းသောအဓိကအစီအစဉ်ကိုကမ်းလှမ်းသည်။ တွဲဖက်ကုလားထိုင်များဖြစ်သော Mark Chiolis နှင့် Craig German အောက်ရှိတိုးချဲ့ထားသော TR-X; Joachim Zell ၏ ဦး ဆောင်မှုအောက်တွင် Supersession ကိုအသစ်ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ရုပ်ရှင်တိုတို၏တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုနှင့် post ကိုအဆုံးသတ်ခြင်းကိုအဆုံးသတ်လိမ့်မည်။ စပီကာ ၇၀ ကျော်သည်လေးရက်ကြာဆုတ်ခွာနေစဉ်အတွင်းထိုးထွင်းသိမြင်မှုနှင့်စကားပြောဆိုမှုကိုလှုံ့ဆော်ပေးလိမ့်မည်။
အဓိကကွန်ဖရင့်အစီအစဉ်ကိုကြေငြာရာတွင် Schubin က“ တင်ပြချက်များကိုမတွေ့မချင်းမည်သည့်ပြissuesနာများကိုဆွေးနွေးမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့နှစ်စဉ်မသိရဘဲ၊ လက်နက်ဗီဒီယိုမှသည်ကားဝယ်ယူသူကိုလက်ခံခြင်းအထိ၊ ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ပို့စ်များ၏အနာဂတ်အထိအရာရာအားလုံးကိုလေ့လာရန်မျှော်လင့်နေပါတယ်။ ငါမစောင့်နိုင်ဘူး! "
၂၀၂၀ HPA နည်းပညာဆုတ်ခွာအစီအစဉ်
တနင်္လာနေ့၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၇
ယခုနှစ် Mark Chiolis နှင့် Craig German တို့မှထုတ်လုပ်သည့်ရက်ဝက်ကြာဆွေးနွေးပွဲ TR-X သည်နည်းပညာပြောင်းလဲမှုအရှိဆုံးပြောင်းလဲမှုများသည်ကျွန်ုပ်တို့တစ် ဦး စီ၏လုပ်ဆောင်ပုံကိုအခြေခံကျကျပြောင်းလဲစေနိုင်ပုံကိုဆန်းစစ်လိမ့်မည်။ အကြောင်းအရာတစ်ခုဖန်တီးနိုင်ရင်ဘယ်လိုဖန်တီးမလဲ။ ဒီခေတ်သစ်မှာဘာကျွမ်းကျင်မှုအသစ်တွေလိုအပ်မလဲ။ ပြောင်းလဲမှုအရှိန်အဟုန်သည်နေ့စဉ်ဖြစ်လာသည်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်တို့တစ် ဦး စီသည်အသစ်ဝင်ရောက်လာသောအလုပ်သမားများမှလုပ်သားအင်အားအထိဟောင်းနွမ်းသောလက်သို့မည်သို့ဆက်လက်လေ့လာကြမည်နည်း။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပညာတတ်များမှအမြော်အမြင်ရှိသူများသို့စက်မှုလုပ်ငန်းရှေ့ဆောင်များအထိ၊ ၎င်းသည်ပြန်လည်ထူထောင်ထားသောအနာဂတ်တွင်အသက်ရှင်နေထိုင်ခြင်းနှင့်အလုပ်လုပ်ပုံနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့စူးစမ်းလေ့လာပါမည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ခေါင်းစီးဟောပြောသူများထဲတွင် MovieLabs မှ Mark Turner၊ Devoncroft မှ Josh Stinehour နှင့် NASA မှ Rodney Grubbs တို့ပါဝင်မည်။
ရက်တစ်ဝက် TR-X အတွက်မှတ်ပုံတင်ခြင်းသည် All-Access မှတ်ပုံတင်ခြင်းတွင်ပါ ၀ င်သည်သို့မဟုတ်သီးခြားမှတ်ပုံတင်ခြင်းအဖြစ် ၀ ယ်နိုင်သည်။
အင်္ဂါနေ့, ဖေဖော်ဝါရီလ 18
Supersession: HPA သည်ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးသည်
previs မှ popcorn သို့ Supersession ဥက္ကChair္ဌ Joachim Zell သည်အမျိုးမျိုးသောနည်းပညာများနှင့်နည်းစနစ်များနှင့်အတူစမ်းသပ်ပြီးမူလ HDR ထုတ်လုပ်မှု၏အစိတ်အပိုင်းအားလုံးမှတစ်ဆင့်ပရိသတ်ကိုလမ်းလျှောက်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ထုတ်လုပ်မှုတွင် ASC အပါအဝင် Roy Wagner အပါအ ၀ င်အလုပ်လုပ်သောပညာရှင်များ၏ကျွမ်းကျင်မှုကိုဖော်ပြထားသည်။ စတီဗင် Shaw, ASC, DGA; ပတေရုသမော့စ်, ASC, ACS; နှင့် Sam Nicholson, ASC ။ နေ့သည်ရုပ်ရှင်တို့ကိုပြသခြင်းဖြင့်အဆုံးသတ်လိမ့်မည်။
နောက်ဆုံးပေါ်နှင့်အကြီးမြတ်ဆုံးနည်းပညာကိုတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှနှင့်လက်တွေ့တွင်အတွေ့အကြုံရှိလိမ့်မည်။ ကင်မရာရိုက်ချက်များ၊ မှန်ဘီလူး metadata ကိုင်တွယ်ခြင်း၊ cloud workflows၊ ဖွဲ့စည်းမှုနှင့်တည်းဖြတ်ခြင်းတွင်နောက်ဆုံးပေါ်၊ ရိုးရာပြဇာတ်ရုံများအတွက် YouTube၊ Netflix, Hulu၊ ။
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, ဖေဖော်ဝါရီလ 19
ကွိုဆို - ရှေ Hallen, HPA သမ္မတ
ပြန်လည်သုံးသပ်အတွက်နိဒါန်း & နည်းပညာနှစ် - မာကု Schubin
ဝါရှင်တန် Update ကို - Jim Burger, Thompson Coburn LLP
CES ဆန်းစစ်ခြင်း - Peter Putman, ROAM အတိုင်ပင်ခံ
Decoding CES 2020 - မီဒီယာနှင့်ဖျော်ဖြေရေးကိုအကျိုးသက်ရောက်စေမည့်အဓိကလမ်းကြောင်းများ - Mark Harrison၊ ဒီဂျစ်တယ်ထုတ်လုပ်မှုမိတ်ဖက်
“ အသံလွှင့်သူများ” panel - Moderator - Matthew Goldman၊ MediaKind
Immersive Media ၏စိန်ခေါ်ချက် - USC ကျောင်းသားများသည်အနာဂတ် - အနီးအနားရှိဖျော်ဖြေမှုကိုမျှော်မှန်းသည် - Phil Lelyveld, California တောင်ပိုင်းရှိ Entertainment Technology Center
အဆိုပါပြဇာတ်ရုံကြီးမားတဲ့တီဗီမဟုတ်ပါဘူး - ဂျယ်ရီပီယပ်စ်၊ လူ့အဖွဲ့အစည်းဒီဂျစ်တယ်ရုပ်ရှင်ရုံဖိုရမ်၊ ပြဇာတ်ရုံပိုင်ရှင်များအမျိုးသားအသင်း
မည်သည့်ဆုံးဖြတ်ချက်တွင်မဆိုပူးပေါင်းပါဝင်ခြင်း။ ကျန်သူများအတွက် Virtual Production - အနုပညာဒါရိုက်တာများအစည်းအရုံးနှင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရိုက်ကူးရေးသမားအစည်းအရုံး
သုံးသပ်သူ - မိုက်ကယ်ချမ်ဘလစ်၊ ICG
Eliot Mack, Lightcraft နည်းပညာ
Benjamin Nowicki, အနုပညာဒါရိုက်တာ
In-Camera Visual Effects - David Morin၊ Epic Games
Live Production တီထွင်ဆန်းသစ်သောဖြေရှင်းမှုများနှင့်လုပ်ငန်းအသွားအလာပေါ်လွင်ချက်များ -
သုံးသပ်သူ - Mark Chiolis၊ Mobile TV Group
မိုဘိုင်းတီဗီအဖွဲ့ Nick Garvin
4K & 8K အကြားသိမှုဆိုင်ရာခြားနားချက်ကိုစမ်းသပ်စစ်ဆေးသည် - Michael Zink၊ Warner Bros.
စွဲငြိဖွယ်ကောင်းသောအသံထုတ်လွှတ်မှု - Brian Vessa၊ Sony က ရုပျပုံမြား
အဘယ်ကြောင့်ရိုးရာသတင်းအချက်အလက်လုံခြုံရေးမီဒီယာ & ဖျော်ဖြေရေးအများစုနှင့်မကိုက်ညီဘူး? - မာ့ခ် Zorn၊ HBO / WarnerMedia
ကြည့်ရှုသူများအား Photosensitive Epilepsy (PSE) မှသိမ်းဆည်းရမိခြင်းမှကာကွယ်ရန်နောက်ဆုံးပေါ်နိုင်ငံတကာလမ်းညွှန်ချက်များ - John Harris, Cambridge သုတေသနစနစ်များ
ကျွမ်းကျင်ခြင်းနှင့်အပ်နှံခြင်းဆိုင်ရာ Adventures အသစ်များ (compression edition) - Josh ထင်းရှူး, Technicolor
ဘာဖြစ်သွားတာလဲ တစ်နေ့တာ၏ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း ဂျယ်ရီပီယပ် & လီယွန် Silverman ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်
ဆန်းသစ်တီထွင်မှုဇုန် ception ည့်ခံ (အထူးသရုပ်ပြအချိန်)
ကြာသပတေးနေ့၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀
MovieLabs 2030 Vision ၏
နိဒါန်း - Rich Berger၊ MovieLabs
တိုနီ Gaughan, RSTOR
ဒေးဗစ် Phillips က, Cloudian
အဲရစ် Bassier, ကွမ်တမ်
မာကု Harrison, DPP
Guy Finley၊ ယုံကြည်ရသောပါတနာကွန်ယက်
Omer Farooq, လွတ်လပ်သောလုံခြုံရေး Evaulators
ဂျိမ်း Wilson က IBM Aspera
software ကို - သတ်မှတ်ထားသောလုပ်ငန်းအသွားအလာ
Moderator: Mark Turner, Entertainment Technologies
Richard Duke, လွန်စွာလိုလားသော
ကဲနက် Cuomo, Vimond IO
စတိဗ်မောရစ်, Skywalker အသံ
မာတင် Coles, IPV
ခရစ် Lennon, MediAswers
ACES နောက်ဆုံးအခြေအနေ - ညှိနှိုင်းရေးမှူး Annie Chang၊ Universal
VFX / ကာတွန်းအတွက်ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်ဆော့ဗ်ဝဲအခြေအနေ၊ Moderator: Academy Software Foundation၊
Vid2Vec - မီဒီယာအကြောင်းအရာအတွက်စက်ဘာသာစကား USC မှဖျော်ဖြေရေးနည်းပညာစင်တာ Yves Bergquist
Chaos on Demand: အွန်လိုင်းဗီဒီယိုသည်အဝတ်အထည်အသစ်များရဲ့ဟောင်းနွမ်းသောနေ့ရက်များလား။ - Rowan de Pomerai၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်ထုတ်လုပ်မှုမိတ်ဖက်၊ ယူကေ
ကြီးမားသော LED ဖန်သားပြင်နှင့်အတူကျွမ်းကျင် - John Quartel၊ ကုမ္ပဏီ ၃
SMPTE Update ကို - သောမတ်စ် Bause Mason ဆို, SMPTE
ဘာဖြစ်သွားတာလဲ တစ်နေ့တာ၏ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း - ဂျယ်ရီပီယပ်နှင့်လီယွန် Silverman
Post Show: ဘာကြောင့်ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးမှာပြရတာလဲ အဆိုပါ Brady စည်း အိမ်အရောင်ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်မရနိုင်ပါ - Ed Grogan
အချိန်ဇယားအပါအဝင် 2020 HPA Tech Retreat အတွက်အစီအစဉ်အပြည့်အစုံကိုရရှိနိုင်ပါသည် www.hpaonline.com။ အပိုဆောင်းအစည်းအဝေးများနှင့်စပီကာထုတ်ပြန်ကြေညာပါလိမ့်မယ်။ (နောက်ဆုံးအချိန်ဇယားကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်တစ်ခုဖြစ်သည်သတိပြုပါ။) ကွန်ဖရင့်အစီအစဉ်အပြင်၊ အဓိကစက်မှုလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူများ ဦး ဆောင်သောနံနက်စာစားပွဲစားပွဲ ၅၀ ကျော်ပါဝင်သည့်ကျယ်ပြန့်သောကမ်းလှမ်းချက်ကိုအင်္ဂါနေ့၊ ဗုဒ္ဓဟူးနှင့်ကြာသပတေးနေ့နံနက်တို့တွင်စတင်သည်။ ဆန်းသစ်တီထွင်မှုဇုန်သည်အင်္ဂါနေ့မှကြာသပတေးနေ့မှကြာသပတေးနေ့အထိပြန်လည်ရောက်ရှိလာပြီးကုမ္ပဏီ၏ ၆၀ နီးပါးမှပေါ်ထွက်လာသောနှင့်တီထွင်ဆန်းသစ်သောနည်းပညာများကိုလုပ်ငန်း၏ရှေ့တန်းမှရှာဖွေရန်အခွင့်အလမ်းကိုတင်ပြသည်။
HPA ၏ဥက္ကpresident္ဌ Seth Hallen က“ HPA Tech Retreat ဟာ ၂၅ နှစ်လုံးလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ဗဟုသုတနှင့်နက်ရှိုင်းသောနားလည်မှု၏မှတ်ကျောက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်မှုလုပ်ငန်း၏အနာဂတ်သည် Tech Retreat ၌စူးစမ်းသောတင်ဆက်မှုနှင့်နည်းပညာ၏အဓိကအချက်ဖြစ်သည်။ Mark Schubin သည်ထူးခြားသောအစီအစဉ်တစ်ခုကိုအတူတကွကျင်းပခဲ့ပြီး၊ ပြီးတော့ ၂၀၂၀ HPA Tech Retreat ရဲ့ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်နဲ့အညီကျနော်တို့ Supersession မှာရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးနေပါတယ်။ နောက်ခံများမှကင်မရာများနှင့်အမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုများအထိကျွန်ုပ်တို့သည်မျိုးဆက်သစ်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းကိုနက်နက်နဲနဲနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းစူးစိုက်သွားမည်။ TR-X သည် ဆက်လက်၍ တိုးတက်နေပြီးယခုနှစ်တွင်အနာဂတ်နှင့် ပတ်သက်၍ မည်သို့လေ့လာရမည်၊ ကော်မတီခေါင်းဆောင်များ၊ စပီကာများနှင့်ကျွမ်းကျင်သူများ၏ပရိုဂရမ်တွင်ပါ ၀ င်သောမယုံနိုင်လောက်အောင်အလုပ်နှင့်ပါရမီရှင်များကိုမြင်တွေ့ရသည့်အတွက်ကျွန်ုပ်သည် HPA ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ခြင်းအတွက်အလွန်ဂုဏ်ယူမိပါသည်။ ”
Gold Title Sponsor Adobe, Gold Sponsors ၏ရက်ရောမှုကြောင့် HPA Tech Retreat ကိုပြုလုပ်နိုင်သည် Blackmagic ဒီဇိုင်း နှင့် Nutanix, Silver Sponsors SDVI, Signiant နှင့် Stellus, ကြေးပံ့ပိုးသူများ လွန်စွာလိုလားသော၊ LaCie နှင့် Zeiss တို့၊ Event Sponsor CP CP နှင့် Dell Technologies၊ Star Sponsor Cloudian နှင့် Foundation မှပံ့ပိုးသူများ လွန်စွာလိုလားသော, Dolby, EFILM, Encore, Deluxe Toronto နှင့် Level3Post ။
HPA Tech Retreat သည်aည့်သည် ၇၀၀ ဦး အားအကန့်အသတ်ဖြင့်တက်ရောက်နိုင်သောကန့်သတ်ထားသောတက်ရောက်ခြင်းအခမ်းအနားတစ်ခုဖြစ်သည်။ မှတ်ပုံတင်ခြင်း နှစ် ဦး စလုံး 'passes နှင့်အပြည့်အဝကွန်ဖရင့်အဘို့အဖွင့်သည်။ ဝဘ်ဆိုက်မှတ်ပုံတင်ခြင်းမရရှိနိုင်ပါ မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်အစီအစဉ်အသေးစိတ်များအပါအ ၀ င် HPA Tech Retreat အကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုလျှင်ရရှိနိုင်ပါသည် www.hpaonline.com.
တယ်ရီမက်ကာသီကိုအမေရိကန်ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရေးအသင်း၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်အဖြစ်ခန့်အပ်ခဲ့သည် - ဇန်နဝါရီလ 16, 2020
Sohonet သည်ဆက်သွယ်ရေး၊ ချိန်းဆက်သွယ်ရေးကိုရယူသည် - ဇန်နဝါရီလ 15, 2020
ဂျက် Wyrick Chesapeake စနစ်များကိုပူးပေါင်းခဲ့သည် - ဇန်နဝါရီလ 15, 2020
Aurora ကနျြးမာရေးကင်ပိန်း / ကိုလိုနီထောက်ခံ လွန်စွာလိုလားသော ထုတ်လွှင့်-လူမှုမီဒီယာ ထုတ်လွှင့်-SocialMedia တည်းဖြတ်ခြင်း ဖြစ်ရပ်များ ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor HPA HPA Tech မှသီးသန့် isovideo, viarte, HDR, ဆူညံသံလျှော့ချရေး, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC ကို, 2015, ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး, စွဲငြိဖွယ်ရာ, UHD / 4K / HD ကို H264 / H265, ဝါဆော မီဒီယာ post ကိုထုတ်လုပ်မှု SJGolden - SoftAtHome, MStar, CES2017 လှံ & Arrows ကိုလိုနီခေတ် ကိုလိုနီခေတ် - သတင်း ကိုလိုနီ / ချီကာဂို TVU ကွန်ယက် က Ultra HD ဖိုရမ်	2020-01-13
ယခင်: ကုန်ပစ္စည်းဒီဇိုင်နာ: ပျော့ပျောင်းသောကုန်ပစ္စည်းများ
နောက်တစ်ခု: LiveU Solo သည် Isha ဖောင်ဒေးရှင်းကိုအိန္ဒိယနှင့်ကမ္ဘာတဝှမ်းရှိသန်းပေါင်းများစွာသောလူများနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်ကူညီသည်